Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban…(QEYBTII u DAMBEYSAY ee 20-AAD)+SAWIRRO - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban…(QEYBTII u DAMBEYSAY ee 20-AAD)+SAWIRRO
June 13, 2018 at 11:28 Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban…(QEYBTII u DAMBEYSAY ee 20-AAD)+SAWIRRO2018-06-13T11:28:06+00:00 CAYAARAHA
( World Cup ) 13 Juunyo 2018. Dhacadada ugu wayn kubbada cagta adduunka ee “World Cup” ama Koobka Addunnka ayaa waxaa ka harsan maalin qura, GoolFM.net ayaa go’aansatay inay idin soo gudbiso Taariikhda koobka adduunka oo Kooban tan iyo markii uu soo bilowday ilaa iminka. 1930-kii ilaa 2014.
Maanta waxaan idin soo gudbineynaa Taariikhdii u dambeysay ee cayaaraha adduunka waana qeybta 20-aad ee la gabtay sanadkii 2014-kii.
2014 FIFA World Cup waa markii 20-aad ee la ciyaaray tartanka ciyaaraha adduunka waxaana lagu marti galiyay dalka Brazil waxaana uu bilowday 12 June ilaa 13 July 2014, kadib markii lagu abaal mariyay marti galinta FIFa 2007. Waana markoodii labaad oo ay marti galiyaan koobka adduunka tan iyo 1950, waxayna aheyd markii 5-aad oo ciyaaraha adduunka lagu marti galiyo koonfur America.
31- dal ee tartanka usoo gudbay ayaa kula biiray martigaliyayaasha Tartanka iyadoo Bosnia and Herzegovina ee ahayd dalka qura ee markii ugu horeesay koobka aduunka ciyaaray .
Dhamaan tartanka waxaa la dheelay 64- kulan oo lagu ciyaaray 12- garoon oo ku yaala Magaalooyinka Brazil.
Waxay aheyd markii ugu horeesay oo koobka aduunka Garsoorayaashiisa ay isticmaalaan Aadalaha Farsamada Goolka ama goal-line technology, iyo sidoo kaleeto agabka buufinta ee lagu xariiqo halka laga tuurayo kubadaha laadadka xorta ah.
Dhamaan waxaa tartaanka ciyaaray dadalkii ku guuleestay koobka aduunka tan iyo markii lasoo bilaabay tan iyo 1930 – oo kala ah Argentina, Brazil, England, France, Germany, Italy, Spain iyo Uruguay.
Spain, oo difaacanayay koobka ayaa ku haray jeerka Group-ka iyadoo dhinaca kalena ay Group-ka ay ku hareen England and Italy.
Uruguay ayaa iyaguna ku haray wareega 16-ka halka france ay ku hareen wareega 8-da.
Xulka Marti galiynayay koobka ee Brazil, kuwaa oo ku guuleestay 2013 koobka qaaradaha adduunka ee FIFA Confederations Cup, ayaa guul daro culus kala kulmay Germany markii looga badiyay 7–1 ciyaartii semi-finals ka ay isaga hor yimaaden waxaana ay tartanka ka galeen kaalinta afaraad.
Ugu dambeyn, Germany ayaa garaacday finalka Argentina kulan ku dhamaaday 1–0 waqtigii dheeriga waana markoodii afaraad ee ku guuleestaan koobka adduunka iyo markii ugu horeesay ee Germnay-gii midoobay ay qaadaan tartanka tan iyo 1990, Waxaana ka war qabnaa in Garbeedkii Germany ay sidoo kale garaaceen Argentina finalkii u dambeeyay ee isla sanadkaas.
Germany wuxuu noqday dalkii ugu horeeyay ee koobka adduunka ku qaaday Qaarada America, Waxeyna natiijadaas ka dhigtay markii ugu horeesay wadamo isku qaarad ah inay ku guuleestaan seddax dhacdo xariir ah koobka aaduunka kadib Italy 2006 Spain 2010 iyo Germany 2014.
DAAWO SAWIRRADA KOOBKII ADDUUNKA SANADKII 2014.
Messi oo ku guuleystay cayaariyahanka ugu fiicnaa tartanka
« Puntland amartay in degaannadeeda laga xannibo SNLTV
Madaxweyne Gaas oo xilalkii ka qaaday agaasimayaashii hay’adaha PIA iyo PSS »